बालबालिका ‘बुलिङ’को शिकार भइरहेका त छैनन् ? – Nepal Headlines: Highlighted news from all over the world.
बालबालिका ‘बुलिङ’को शिकार भइरहेका त छैनन् ?
२०७७ माघ १७ गते १४:१६
नेसनल सेन्टर फर एजुकेसनल स्टाटिस्टिक्सका अनुसार १२ देखि १८ वर्ष उमेरका विद्यार्थीहरूमध्ये एक तिहाइलाई विद्यालयमा बुलिङ हुने गरेको छ ।
भावनात्मक बुलिङमा कसैलाई होच्याउने, कसैलाई नराम्रो नाम राखेर बोलाउने, नराम्रो प्रतिक्रिया दिने, जिस्क्याउने, गालीगलौज गर्ने आदि कुरा पर्छन् । यसमा पीडितलाई बहिष्कार गर्ने प्रयास पनि पर्छ । जस्तै ः एक्लै छोडिदिने वा वास्ता नगर्ने आदि ।
प्याक बुलिङमा शारीरिक, भावनात्मक बुलिङ वा साइबर बुलिङ पर्छन् । यस्तो बुलिङ विद्यालयको चौरमा, विद्यालयको हलवेमा, भ¥याङमा, खेलमैदानमा, जिमखानामा, कक्षाकोठामा वा स्कूल बसमा पनि हुनसक्छ ।
व्यक्तिगत बुलिङ भनेको एकले अर्कोलाई गर्ने (वान-अन-वान) बुलिङ हो । जुन अनलाइन मार्फत, प्रत्यक्ष गरिने शारीरिक वा भावनात्मक बुलिङ हुनसक्छ । सन् २००९ मा अष्ट्रेलियामा गरिएको एक अध्ययनअनुसार यो प्राथमिक विद्यालयमा धेरै हुने गरेको छ ।
-एनसिइएसको रिपोर्ट अनुसार मध्य कक्षाहरू (६–७) मा सिनियर स्कूलमा भन्दा पनि धेरै बुलिङ हुन्छ ।
-बुलिङबाट ६ कक्षामा पढ्नेहरूलाई धेरै शारीरिक चोट लाग्ने, ८–९ पढ्नेलाई अलि कम र हाइस्कूलकालाई निकै कम चोट लाग्ने गरेको छ ।
बुलिङबाट पीडितहरूमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू देखिन्छन्
निर्देशक दिनेश राउतको ‘प्रकाश’बाट रेनुको डेब्यू
‘चीनले आफ्नो विकास अनुभव सबै मित्रहरुलाई सुनाउन चाहन्छ, थोपर्न होइन’